Idaacadda Bar-kulan oo laga dhageysan jirey Muqdishu iyo Nairobi iyo gobolo kale oo la xirayo
Laga billaabo bisha September 7, 2016, Raadiyaha Bar-Kulan (RBK) wuxuu xirayaa howlgalkiisa Nairobi oo laga billaabo xilligaas waxaa istaagayo jadwalka baahinta idaacadda, waxaana lagu beddelayaa wargelin laga baahin doono mowjadaha FM-yada ee ay idaacaddu ku leedahay Muqdisho, Beledweyne, Baydhabo iyo Kismaayo.
Idaacadda waxay muddo ka badan lix sano baahineysay warar, barnaamijyo iyo madadaalo. Waxay yeelatay dhageystayaal ku xiran oo ka dhageysanayey mowjad FM toddoba gobol oo gudaha Soomaaliya ah, dalalka gobolkana waxaa laga dhageysanayey sataleydka Thaicom, halka caalamka intiisa kalana si toos ah looga dhageysan jiray websaydka idaacadda, taleefanka iyo adeegyada kale ee uu dhageystuhu wacayo nambar.
Raadiyuhu waxaa uu gaaray guul sababtoo ah xirfadda iyo u ja-jabnaanta shaqo ee shaqaalihiisa oo ay wehliyaan ku xirnaashaha iyo fal celinta ka imaneyay dhageystayaasheena.
Waxaan u mahadcelineynaa dhammaan taageerayaasheena, dhageystayaasha iyo cid kasta oo wax ka geysatay raadiyahan Soomaaliyeed tan iyo markii la dhisay. Waxaa la rajeynayaa in guulaha ay gaartay RBK loo weecin karo billaabidda qorshe iyo adeeg cusub oo kale, haddii tani ay xaqiiqowdo waxaa wargelinteeda lagu baahin doonaa halkan iyo FM-yada idaacadda intuba.